डोमिनिकन गणतन्त्र मा पर्यटक सिजन
एक भिसा-मुक्त देशहरूमा डोमिनिकन गणतन्त्र जो बीच सबै भन्दा ठूलो Beata र Saona मानिन्छ धेरै टापुहरू, मा स्थित छ को। अटलांटिक महासागर - दक्षिण पक्षमा यो क्यारेबियन सागर, र उत्तरी द्वारा धोए छ। देश मा छुट्टी - यो घाम, आनन्द र मजा संसारमा खरानी दैनिक जीवन र प्रवेश बारे भूल एक महान अवसर हो। रूसी पर्यटक सबैभन्दा लोकप्रिय रिसोर्ट्स जुआन Dolio, Punta Cana, स्यान्टोडोमिङ्गो, Boca Chica, ला Romana र मानिन्छ Puerto Plata। कारण यसको भौगोलिक स्थान र डोमिनिकन गणतन्त्र देशको छुट्टी सिजन को climatic विशेषताहरु गर्न लगभग सबै वर्ष दौर रहन्छ। औसत तापमान वर्ष भर, हावा 26-27 डिग्री छ सेल्सियस र पानी तापमान तल खस्छ 22 डिग्री। यहाँ तपाईँले सेतो समुद्री तट मा बाहिर मात्र होइन एक आराम छुट्टी ले, तर पनि रोमाञ्चक यात्रा, स्कुबा डाइभिङ वा माछा मार्ने धेरै बनाउन।
छुट्टी लागि सबैभन्दा अनुकूल अवधि
धेरै मानिसहरू देश भ्रमण गर्छन, तर यो एक बाँकी डोमिनिकन गणतन्त्र मा सबै भन्दा राम्रो सिजन हुँदा सबैले थाह छ। यो देश भ्रमण गर्न सबैभन्दा अनुकूल समय डिसेम्बर र मार्च बीच छ। यी महिनामा सूर्य वर्षा व्यावहारिक अवलोकन गर्न थप नरमररुपले चमकता र सजिलै, पानी तापमान समुद्र शान्त छ, 27 डिग्री सेल्सियसमा rises, र रात तापमान तल 24 डिग्री सेल्सियस ड्रप छैन। कारण सागर breezes र उच्च आर्द्रता गर्मी गर्न एकदम सजिलै हस्तान्तरण गरिएको छ।
यो समयमा, को लागि आफ्नो उत्कृष्ट मौसम खुसी हुनेछ मात्र होइन पर्यटकहरु डोमिनिकन गणतन्त्र। आराम गर्न सिजन - यो डाइभिङ snorklin, माछा मार्ने सहित परम्परागत जल खेलकुद, मा Indulge मौका छ। साथै, यो अवधिमा विभिन्न enchanting मेला, धेरै बिदाको र चाडहरूमा छन्। एक मात्रा छ स्वतन्त्रता दिवस, फेब्रुअरी 27 मा मनाइन्छ जो। यो दिन मा, वर्गहरूको र सहरका मुख्य सडकमा विदेशी उत्सव वेशभूषा मा स्थानीय को रंगीन र उज्ज्वल procession छन्। उत्तिकै प्रभावशाली मात्र भाग हेर्न सक्छन् जो, तर पनि सहभागी बन्ने मिरेन्गु, को तिहार छ।
अप्रिल मा बिदाहरू
ताजा समुद्र हावा रमाइलो गर्न चाहने, तर तातो मौसम सहनुहुन्न ती, यो पर्यटक सिजन डोमिनिकन गणतन्त्र भन्दा भएपछि छुट्टी मा जान सिफारिस गरिएको छ। यस समयमा, वर्षा छैन धेरै छ। आकाश अक्सर बादल लागेको छ रूपमा सूर्य छैन रूपमा सक्रिय छ। यो महिना, यो हरेक दिन sunbathe सम्भव छैन। अप्रिल मा, त्यहाँ बादल आकाश को बाबजुद, समुद्र शान्त रहन्छ किनभने, पानी शिकार र डाइभिङ को प्रशंसक जाँदैछन्। साथै, एक रहन को लागि मूल्य उच्च सिजन भन्दा अलि कम छ।
मई मा बिदाहरू जुलाई -
तपाईं नोभेम्बर अप्रिल गर्न डोमिनिकन गणतन्त्र मा आराम गर्न समय थियो छैन भने, त्यसपछि आफ्नो यात्रा अर्को अनुकूल अवधि सम्म, मे डोमिनिकन गणतन्त्र मा वर्षाको सिजन सुरु मा थियो सौतेली। यो महिना मा भारी वर्षा पर्छ। मौसम स्पष्ट एक rarity छ, र भारी वर्षा दिन को समयमा ज्यादातर छन्। साथै, हुर्रिकानेस मई मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। समुद्र व्यस्त, त्यसैले राम्रो पर्याप्त पौडी खेल्न सक्छ गर्नेहरूलाई, यो भाग्य लोभ्याउन सिफारिस गरिएको छैन। यस्तै मौसम र जुन सम्पूर्ण सँगसँगै। तर जुलाई मा, वर्षा धेरै कम हुन्छ। यो महिना मा beaches र होटल धेरै जीवित र धेरै पर्यटकहरु भरिएको छ। जुन को मुख्य कमियां दिन को समयमा सूर्य scorching छन् र अझै पनि वर्षा समाप्त छैन, छैन हुनत रूपमा मई को रूप मा बारम्बार।
मा अगस्ट-सेप्टेम्बर बाँकी
डोमिनिकन गणतन्त्र मा उत्तेजक महिना अगस्ट छ। यो अवधिमा तापमान लगभग कहिल्यै तल 30 डिग्री सेल्सियस खस्छ छ। यो अगस्ट मा समुद्र समीर भनेर गर्मी सहन सकिने बनाउँछ, शांत पर्याप्त थिएन भने, यो दिन बाहिर जाने समयमा सम्भव छैन थियो। साथै, डोमिनिकन गणतन्त्र मा वर्षाको सिजन त्यसैले यो महिना अझै पनि वर्षा को एकदम ठूलो रकम छ अक्सर typhoons र हुर्रिकानेस आउन अझै, समाप्त भएको छैन। लेट गर्मी वा प्रारम्भिक शरद ऋतु मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा छुट्टी मा जाने यी कारणहरू सिफारिस गरिएको छैन लागि यो छ। तर यो बावजुद, धेरै पर्यटक यो अवधिमा कम मूल्यहरु धन्यवाद यात्रा गर्न चयन गर्नुहोस्।
अक्टोबर मा बिदाहरू
यसको विशेषताहरु अक्टोबर मौसम लगभग पूर्ण अप्रिल पारस्परिक रहेको छ। डोमिनिकन गणतन्त्र यो महिना वर्षाको सिजन अझै माथि छैन, तर वर्षा धेरै कम हुन्छ। आकाश अक्सर बादल लागेको छ रूपमा कुनै scorching सूर्य छ। समुद्र पहिले नै शान्त। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मूल्य अझै समय पर्यटक सिजन उचाइ अवलोकन ती उठ्नेछ थियो गरेको छैन। अक्टोबर दिन यात्राहरु, तपाईं परम्परा र स्थानीय को संस्कृतिको बारेमा सिक्न सक्छौं जुन बेलामा मध्ययुगीन सहर को वास्तुकला को विशिष्टताको मूल्यांकन र बस जहाँ कदम पृथ्वी, हिंड्न लागि आदर्श छ Hristofor Kolumb।
के हेर्न बिदाको डोमिनिकन गणतन्त्र
अरू के पर्यटकहरु डोमिनिकन गणतन्त्र आकर्षित? बाँकी (समीक्षा यसलाई पुष्टि), तपाईं देश को धेरै रोचक ठाँउहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जुन बेला शानदार समुद्र तट, नीला समुद्र र अनुकूल जलवायु, धेरै यात्राहरु सँगसँगै, बाहेक। तसर्थ, असामान्य वास्तुकला गिरजाघर Basilica Higvey स्यान्टोडोमिङ्गो मा स्थित छ। एउटै शहरमा सुन्दर लेमन झरना, रहस्य मा shrouded, जो संग धेरै दन्त्यकथा छ। कुनै कम आकर्षक Aguas Blancas झरना, Constanta शहर को 10 किलोमिटर दक्षिण स्थित मानिन्छ। डोमिनिकन गणतन्त्र छुट्टीको समयमा Wonderland गुफा, बेसी Kumayasa र Soco नदी मा स्थित छ जो भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
बाकु मा टावर प्रथम
Gelendzhik: छुट्टी बच्चाहरु संग। समीक्षा र फोटो
अस्पताल "Tsiolkovsky" (समारा): सेवा र मूल्य
Kosh-Agach को गाउँमा। को Altai क्षेत्र पर्यटन
Sturgeon कसरी खाना पकाउनु
राम्रो Jokes को आधारभूत नियमहरू: स्कूल मा मित्र कसरी खेल्ने!
बजार अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेल र आफ्नो विशिष्ट सुविधाहरू
रूस मा मुद्रास्फीति को सुविधाहरू
वयस्क र बच्चाहरु को लागि पानी रोचक तथ्य
पदक रूसी रक्षा मन्त्रालय "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि"
आधुनिक नौसेना बन्दुक
Google Chrome मा गुप्त मोड